🍀 - I-Airbnb
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguMildred Lizzet
UMildred Lizzet yi-Superhost
Libala ngokwabelana ngeendawo kunye nomnye umntu okanye ukugula ngabantu abaninzi kwihotele ebiza kakhulu.
Kwimizuzu nje embalwa ukusuka kwiigadi ezintle zemicimbi eCuernavaca, uza kufumana le ndlu incinci intle, ilungele abantu abathandanayo apho uza kufumana yonke into oyifunayo ukuze ulungiselele umcimbi wakho uze ngosuku olulandelayo wonwabele umoya ogcwele zizityalo ngaphakathi.
Indlu esemaphandleni ikwindawo ebiyelweyo enesango lombane apho ungapaka khona imoto yakho ngokukhuselekileyo nanini na, uza kunikwa imvume yokuyisebenzisa. Buza ukuba ithatha imizuzu emingaphi igadi yakho yomcimbi we-casita. Akukho nto ingcono esondeleyo kuyo.
Ukuhamba, kumanyathelo nje ayi-70 ukusuka apho uza kufumana iOxxo kunye nayo yonke into onokuyithenga ngokuhlala kwakho kwaye ngoko sebenzisa ikhitshi lakho elinento yonke oyifunayo ukuze ulungiselele ukuthanda kwakho.
Ukucoca okugqibeleleyo nokuqinileyo kuyo yonke indlu ukuze ube sekhaya.
I-Netflix kwi-smart TV, imidlalo yebhodi kunye nephondo elincinci ukuze ngosuku olulandelayo nangaphambi komcimbi wakho, baqhubeke bonwabela kunye. Sineenkonzo zokubonelela nge-spa, kunye nemasaji, i-Pedi, i-manicure, i-hairstyles, i-makeup, kunye nokunye. Cela iindleko ezongezelelweyo kunye nokufumaneka kwiveki kwangaphambili ukuze ucwangcise.
Ngaphezu koko, sinokulungiselela into emangalisa kakhulu kuye, sifanelwe yibhotile, ii-petals, ibhodi yetshizi, amaqebengwana, isidlo sangokuhlwa kunye nokunye okuninzi. Nceda usazise kwangaphambili kwaye siza kulungiselela yonke into ngeyona mali intle.
Ukuba uyathanda ukwenza izinto eziluhlaza, kufuphi ungathenga i-barbecue yakho, i-conommé, i-tlacoyos, i-tacos kunye nokunye (iimpela-veki kuphela). Ungalibali ukuthenga kwi-Oxxo into oza kuyithatha uze uyigcine kwi-minibar ukuze yonke into ilunge.
Umbuki zindwendwe ngu- Mildred Lizzet